Iipatimenti Jęczmienna 29 - No. 2 - Green
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRemigiusz
IJęczmienna 29 Apartments zikwimbindi yeDolophu eNdala yaseToruń. Kukufutshane ukusuka apha ukuya kwizikhumbuzo kunye neeresityu, kwaye kwangaxeshanye kuzolile kwaye kunoxolo apha. Ngombulelo kwindawo ekhethekileyo, sineendawo ezininzi ezizodwa ezibhalwe kuluhlu lwelifa le-UNESCO, izindlu ezithandekayo kunye nezitrato.
Kwiindwendwe ze-Apartment, indawo yokupaka yamahhala kwindawo evaliweyo kwi-18/1 Warszawska Street iyafumaneka ngexesha lokuhlala kwabo, imizuzu eyi-7 kuphela ngeenyawo ukusuka kwi-Apartment.
Indlu ixhotywe ngazo zonke izinto eziyimfuneko ukuze ikwazi ukuphumla emva kosuku lonke - iimveliso zokucoca ezisisiseko, ilinen yokulala, iitawuli kunye nesethi yezitya kunye ne-cutlery ukulungiselela isidlo. I-TV Led kunye neWiFi yasimahla iya kwenza ixesha lakho lasimahla libe mnandi ngakumbi. Indlu inezifudumezi kunye ne-air conditioning yayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Remigiusz
IiApartments Jęczmienna 29 zinezitshixo ezikhethekileyo ezinekhowudi eyenzelwe ixesha lokuhlala kwakho. Enkosi koku, ungangena ngexesha elikulungeleyo. Kumyalezo owamkelekileyo othunyelweyo, uya kufumana neenombolo zoqhagamshelwano zabantu abaya kukunceda ngexesha lokuhlala kwakho.
IiApartments Jęczmienna 29 zinezitshixo ezikhethekileyo ezinekhowudi eyenzelwe ixesha lokuhlala kwakho. Enkosi koku, ungangena ngexesha elikulungeleyo. Kumyalezo owamkelekileyo oth…